HomeHoryaalka ItalyBarcelona oo go’aansatay inay la soo wareegto Matthijs de Ligt xagaagan.
January 2, 2022 Horyaalka Italy, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
Kooxda Barcelona ayaa lagu soo waramayaa in ay doonayso in ay xagaagan ka keento kooxda Juventus daafaceeda dhexe ee Matthijs de Ligt .
Kooxda reer Catalan ayaa la filayaa inay suuqa u gasho daafac dhexe oo cusub dhamaadka xilli ciyaareedka 2021-22, iyadoo xidiga chelsea ee Andreas Christensen uu ka mid yahay kuwa lala xiriirinayo kooxda.
Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay Gazzetta dello Sport , De Ligt ayaa ah bartilmaameedka ugu horreeya ee Barcelona, ​​iyadoo madaxa kooxda La Liga Xavi uu aad ula dhacsan yahay tayadiisa.
Warbixinta ayaa sheegeysa in kooxdu aysan awoodi doonin inay la soo wareegto xiddiga heerka caalami ee dalka Netherlands bishaan laakiin waxay ku kalsoon yihiin in arrimahooda dhaqaale ay fududaan doonaan xagaaga.
Wakiilka De Ligt Mino Raiola ayaa dhawaan shaaca ka qaaday in kalyantigiisa uu u furan yahay inuu ka tago Juventus mustaqbalka dhow, iyadoo Real Madrid iyo Paris Saint-Germain ay sidoo kale xuseen kuwa doonaya.
22 jirkaan ayaa 95 kulan u saftay Old Lady tan iyo markii uu ka yimid Ajax bishii Luulyo 2019, oo ay ku jiraan 20 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan intii lagu jiray xilli ciyaareedkii 2021-22.
De Ligt ayaa wali labo sano iyo bar uga harsan tahay qandaraaskiisa Turin.